Myanmar Needs New Markets as GSP Withdrawal Looms | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalMyanmar Needs New Markets as GSP Withdrawal Looms
Myanmar Needs New Markets as GSP Withdrawal Looms
Myanmar needs to find new markets for its products as the European Union is considering withdrawing its GSP status, said U Zaw Min Win, President of UMFCCI, atamonthly meeting between the Vice President of Myanmar and local business leaders.
“We are worried that there can be more challenges next year along with pressure from the international community,” he added.
The UMFCCI president said that EU representatives to Myanmar are working to help the country save its GSP status because as residents they know the ground situation in Myanmar.
Myanmar exports to the European Union include fishery and garment products, two sectors with potential to create many jobs.
The EU restored Generalized System of Preferences (GSP) status to Myanmar in 2013 but in January 2019 it revoked GSP privileges foratype of Myanmar rice which is also grown by farmers in the EU.
Around 60 percent of Myanmar’s exports to the EU are garment products, followed by fishery products and rice.
U Zaw Min Win said that despite news reports saying the EU is likely to withdraw Myanmar’s GSP status, he believes suchamove will not occur in the next three to four years.
ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံများ အဖွဲ့ EU မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပေးအပ်ထားသော အထူးကုန်သွယ်ခွင့် အခွင့်အရေး (GSP) ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် ဆောင်ရွက်မှှုများရှိနေခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းရှိ လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် အခြားသော ဈေးကွက်သစ်များကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း UMFCCI ဥက္ကဌ ဦးဇော်မင်းဝင်း က ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဒုတိယသမ္မတနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောသည်။
“ ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတာတစ်ခုက လာမယ့်နှစ်က စိန်ခေါ်မှှုတွေ ပိုများမယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားက လည်း များတယ်။ EU ဘက်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို များသောအားဖြင့် (အထည်ချုပ်ကဏ္ဍ) ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် တို့ကို ပြောတာများတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ EU သံအမတ်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သည့်အတွက် အခြေအနေမှန်ကို သိရှိနေသော်လည်း ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရေး အတွက် တတ်စွမ်းသမျှကြိုးစားလျက်ရှိကြောင်း ဦးဇော်မင်းဝင်းက ရှင်းပြသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံများအဖွဲ့ EU ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အဓိက တင်ပို့လျက်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများစွာ ဖန်တီးပေးထားသည့် ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် တင်ပို့မှှုများ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများအဖွဲ့ EU မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အထူးကုန်သွယ်မှှု အခွန်သက်သာခွင့် GSP ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ EU သို့ တင်ပို့နေသော ဆန်အမျိုးစားတစ်ခုမှာ ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံများအဖွဲ့ EU မှ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရောင်းချနေသည့် ဆန်အမျိုးအစားနှင့် တူညီနေသည့်အတွက် အခွန်သက်သာခွင့် ပြန်လည် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံများအဖွဲ့ EU သို့ မြန်မာပြည်မှ တင်ပို့မှှုများအနက် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ တင်ပို့မှှုမှာ ၆၀ ရာခိုင်နှှုန်းခန့်ရှိပြီး ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ဆန်တို့ကို အဓိကထား တင်ပို့လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ GSP ရုတ်သိမ်းရေးသတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိသော်လည်း လတ်တလော သုံးလေးနှစ်အတွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စရာ မရှိသေးကြောင်း ဦးဇော်မင်းဝင်းက ဆိုခဲ့သည်။
Previous articleThai Investors Eye Comprehensive Tourism Investment in Tanintharyi
Next articleYCDC to Open Restaurants in Yangon Parks